China DLZ-420/520 Computer oluzenzekelayo oluqhubekayo ukolula thermoforming vacuum ukupakisha umatshini abavelisi kunye nababoneleli |INCHOI
I-DLZ-420/520 ikhompyutha ezenzekelayo eqhubekayo yolula umatshini wokupakisha i-thermoforming vacuum
Esi sisixhobo sokupakisha esizenzekelayo esibandakanya ukulula i-thermoforming, i-vacuum (i-inflation yomoya), ukutywinwa kobushushu, ukudibanisa, ukusika, ukuqokelela kunye nokuhambisa.
Umzekelo Ububanzi befilimu ephezulu Ngaphantsiububanzi befilimu Isidanga seVacuum Umoya oxinanisiweyo ukunikezwa amandla amandla Ubunzima obupheleleyo Imilinganiselo
I-DLZ-420 397mm 424mm ≤200pa ≥0.6MPa 380V50HZ 14KW 1800kg 6600×1100×1960mm
I-DLZ-520 497mm 524mm ≤200pa ≥0.6MPa 380V50HZ 16KW 2100kg 7600×1200×1960mm
2.Ngaphantsi kwefilim isixhobo sokubeka i-pre-tensioning
4.Isixhobo sokusika esinqamlezileyo
Inkqubo yekhowudi ye-5.Servo
6.Upper Film ukwenza isixhobo
7.Ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma
8.Umzobo wendibano yekhabhinethi yombane
Isixhobo silungele kakhulu: i-steak, isoseji eyojiweyo, isoseji ekhrispy, iinyawo zenkukhu ezivundiweyo, amaqanda ezagwityi, itofu eyomileyo, iimveliso zentlanzi, iimveliso zenyama yenkomo, iimveliso zegusha, isosi yomhlaba, iziqhamo ezomisiweyo, itshizi, izixhobo ze-elektroniki, iimveliso zetsimbi. kunye nezinye iimveliso ezifuna ukupakishwa kwevacuum.
304 Ulwakhiwo lwesakhelo sentsimbi engenasici
1. Isakhiwo sinamandla amakhulu kunye nokumelana nokubola.Imingxuma ye-screw kwindawo nganye emiselweyo icutshungulwa yi-laser ephezulu echanekileyo ngexesha elinye ukuqinisekisa ukuchaneka kwendibano kunye nokwenza umatshini wonke uqhube kakuhle.
2. Ukwandiswa ngakumbi, xa ifom yokupakisha ifuna ukuphuculwa, iindawo ezifanelekileyo zinokongezwa nangaliphi na ixesha ngokweemfuno zokupakisha.
Isixhobo sokuphakamisa unxibelelwano lwe-axis ezine
1. Isixhobo sokuphakamisa senziwe nge-6061 ye-aviation aluminium alloy, eyandisa ukuzinza kunye namandla amacandelo.Amalungu atyibilikayo amkela iibheringi zomgca ezingenwe phezulu, ezichaneke ngokuma kwaye zizinzile ekusebenzeni.Ukuphakama okuphakanyisiweyo kunokulungelelaniswa ngokusemthethweni ngokobunzima bokupakishwa kwemveliso.Ngaphandle kokutshintsha isantya sokubaleka, umgama wokuphakamisa ufinyeziwe ukuze uphucule isantya sokupakisha somatshini wonke.
2. Amacandelo afakwe ngemikhono yobhedu yegraphite ukunyusa i-lubrication, ukunciphisa i-abrasion kunye nokwandisa ubomi benkonzo.Ukongeza, umkhono wobhedu wegraphite awunyamezeli kakhulu uxinzelelo, oqinisekisa ukutywinwa kwegumbi lokubumba kunye negumbi lokucoca.
Isixhobo sokuqinisa ngemagnethi yangaphambili
1. Ukusebenzisa i-electromagnetic brake, i-brake izinzile kwaye amandla alinganayo, ukuphepha i-phenomenon yokushwabana kunye nokugoqa kweemveliso ezipakishweyo.
2. Umboniso wedijithali ubonisa ukuba amandla okuqinisa ahlengahlengiswa.Isitshixo sinokuhlengahlengiswa ngokufanelekileyo kunye ne-intuitively ngokobunzima, ukuguquguquka kunye nokuthamba kwefilimu yokupakisha ukufezekisa umphumo obalaseleyo wokupakisha.
1. Inkqubo yokulawula ehlakaniphile ithatha i-brand ye-Siemens yaseJamani ngokufanayo, kwaye iindawo zokulawula ziphendule kwaye zibambisane.Ubushushu, ixesha, kunye noxinzelelo lwevacuum yecandelo ngalinye ziboniswa kwiscreen sekhompyuter, kwaye inomsebenzi wayo wokufumanisa impazamo.
2. Ukwamkela isiJamani Siemens high inertia servo motor kunye nomqhubi, indawo yekhonkco ichanekile kwaye isebenza ngokukhawuleza.
Inkqubo yokusebenza ekrelekrele
1. Ukusebenza kwesikrini sokuchukumisa, ukulawulwa kweprogram ngokuzenzekelayo, umboniso womzobo wesimo esipheleleyo sokusebenza, ukufumanisa ngokuzenzekelayo isizathu sokungaphumeleli, kulula ukusebenza nokugcina izixhobo.
2. Isikrini sokusebenza esikrelekrele kunye nobuntu silula kwaye sicace ngakumbi.Ipharamitha nganye inokulungelelaniswa ngokufanelekileyo ngokweemveliso ezahlukeneyo, kwaye iiparitha zenkqubo yemveliso eyahlukeneyo zinokugcinwa.Ukucofa-kanye ukufowuna konga ixesha kunye nomzamo.
Inkqubo yokhuseleko lokhuseleko
1. Zonke iindawo zothumelo;iindawo ezinobushushu;iindawo zokusika kunye nezihambayo zixhotyiswe ngezixhobo zokukhusela, kunye nokutshintsha koqhagamshelwano lwamagnetic kufakwe.Emva kokuba izixhobo zokukhusela zingekho kwindawo okanye izixhobo zokuqala zokukhusela umatshini azikho, umatshini uya kuyeka ngokukhawuleza.
2. Isixhobo ngokwaso sixhotyiswe ngokutshintshwa kokumisa ngokukhawuleza kwiindawo ezahlukeneyo, ukwenzela ukuba kumiswe umatshini ngexesha xa kwenzeka ingozi.
3. Akuvunyelwe ukufikelela izandla, iinyawo, iingalo kunye nezinye iindawo kunye ne-beam switch, emva kokuba ivakalelwe, iya kuyeka ngokukhawuleza.
Inkunkuma inkqubo yokurisayikilisha ifilimu
1. Ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma kunesixhobo sokubona esikrelekrele, esinokuthi silungelelanise ngokuzenzekelayo isantya sokusebenza ngokuhambelana nobude befilimu yenkunkuma.
2. Isixhobo asinangxolo, kulula ukuqokelela ifilimu, ixhotyiswe ngamandla e-150W, ukusebenza ngokungathanga ngqo, ukugcina ukusetyenziswa kwamandla.
Ukubumba kunye nokutywinwa kobushushu
Zonke iimbumba zinokutshintshwa ngokukhawuleza, kwaye iiseti ezininzi zokubumba zingatshintshwa kwisethi yezixhobo ukuququzelela ukupakishwa kweemveliso ezininzi.
Inkqubo ye-multifunctional slitting
Ngokweemveliso ezahlukeneyo, inokuqonda ukunqunyulwa kwekona ejikelezileyo, ukukrazula ngokulula, imingxuma ejingayo, ukunqunyulwa kwe-serrated, ukubetha ngokubanzi kunye nezinye izicelo, kunye nesantya sokutshintshwa kwe-cutter kuyakhawuleza kwaye kulula.
I-1.IsiJamani i-Siemens Computer Programmable Logic Controller (PLC) yokulawula, igalelo elikhulu lomthamo kunye nemveliso.
2. IsiJamani Siemens 10-intshi umbala ujongano lomntu-umatshini touch screen.
3. 1.5KW IsiJamani Siemens inkqubo yokulawula i-servo, isantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kwesinyathelo-nge-nyathelo.
5. Izixhobo zombane ezithunyelwa kwamanye amazwe (i-American Bonner color sensor, i-Schneider contactor & relay, iqhosha lokutshintsha, umkhuseli wamandla, i-Yangming state relay eqinile, i-Japanese Omron iswitch proximity switch, njl.).
6. Icandelo le-pneumatic lithatha i-Yadeke Valve Terminal system ye-pneumatic.
7. Impompo enkulu yokucoca i-vacuum engangcolisiyo yomatshini wokupakisha we-vacuum ophezulu wokupakisha we-vacuum (i-Rietschle/Busch, ozikhethelayo kwiimfuno zomthengi) ongeniswe eJamani kunye nephakheji yokuqala, kunye neqondo eliphezulu le-vacuum ye-0.1 millibar.
8. Inkqubo yokulandelela i-photoelectric evela kumazwe angaphandle kunye nefilimu yombala ingasetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba indawo yepateni ichanekile.
9. Umatshini wonke uthatha i-304 yefreyimu yensimbi engenasici, enegunya eliphezulu, ukuxhathisa okuqinileyo kwe-corrosion kwaye akukho lula ukukhubazeka.
10. I-membrane eziphezulu kunye nezantsi zithatha uhlobo olutsha lwe-propelling membrane system.
11. Ukubunjwa, ukutywinwa kunye nokuphakamisa i-pneumatic lever yokunyusa ngokuzimeleyo kunye nenkqubo yokuzivalela.
12. Ukubeka ngendlela echanekileyo ngaphambili, ngasemva, ekhohlo nasekunene.
13. I-Transverse cutter isebenza ngokuzimeleyo nge-cutter enye kunye nolawulo lwekhompyutha ephakathi.
14. Ixhotyiswe ngenkqubo yokubuyisela inkunkuma yekona.
15. Isilayidi esiphakamisayo sithatha umkhono wobhedu wegraphite ongena-lubricating.
16. Zonke iinxalenye zokwenza, ukutywinwa, ummese onqamlekileyo kunye nommese we-longitudinal uxhotyiswe ngenkqubo yokukhusela ukhuseleko kunye nesikhuselo sokukhusela.
17. Isixhobo sixhotyiswe ngeenkqubo eziphazamisayo okanye ezikhuselayo ezifana nokulahlekelwa kwesigaba samandla okanye ukuguqulwa, umbane ogqithiseleyo okanye ophantsi, i-lubrication periodic mechanical, njl., ezilungele ukuba abaqhubi basebenzise kwaye balungelelanise.Ukhuseleko lokuyeka ngokuzenzekelayo xa kukho ukusilela kwaye ubonise ulwazi lwempazamo kunye nonyango oluhambelanayo lokusilela kwikhompyuter.
Ngaphambili: Umgca wokomisa amandla omoya
Okulandelayo: Horizontal vortex spiral umatshini wokuhlamba
Umatshini wokuPakisha iVacuum yoRhwebo
Umatshini wokuPakisha i-Industrial Vacuum
Umatshini wokuPakisha Inyama
Umatshini wokupakisha weNyama
Umatshini wokuVacuum wokuPakisha ukutya
Ixabiso lomatshini wokupakisha iVacuum
Umatshini wokuPakisha we-Vacuum Skin
Umatshini wokupakisha ohlaziyiweyo ohlaziyiweyo